Gara pane zvakaenzana uye zvakatsetseka nzvimbo. Dzivisa kutenderedza, masitepisi, materu, uye curbs ku kudzivirira chero kukuvara. Nzvimbo dzisina kukwana dzinogona kugadzira wiricheya ibva pachiyero uye zvinogona kukuvadza kana mumwe munhu iri kusunda wiricheya.
Dzivisa nzvimbo dzine jecha asi zviri pamhenderekedzo yegungwa kana munzira. Jecha rinovaka pamatai uye rinokonzera iyo wiricheya kuva pachiyero. Kana kudzivisa nzvimbo ine jecha hakusi kudzivirira, ita pane mumwe munhu anogona kubatsira kuchenesa jecha kubva kumavhiri.
Ziva mamiriro ekunze. Zviri zvakakosha kutarisa mamiriro ekunze usati waenda riinhi kushandisa a wiricheya. Edza kudzivisa kubuda kana kuchinaya uye sinou nekuti ichaita pasi kutsvedza uye kutsvedza. Chero huso hune mvura kana madhibhi zvakashata kune iyo wiricheya. Inogona kukonzera chigaro kutsvedza, kutenderera, kana kukwirisa pamusoro. Kana iwe uchida kubuda kana kuchinaya kana chando, ita mumwe munhu akubatsire. Kana usina mumwe anokwanisa kukubatsira, ita shuwa kushandisa yako wiricheya zvishoma nezvishoma uye nekuchenjerera kudzivirira chero kutsvedza nemasiraidhi.
Gara kure kana kutenderera chero makomba aunoona. Makomba munzvimbo dzakatsetseka kana ramp inogona kuita iyo wiricheya kurasikirwa balance kana tip pamusoro.
Enda nekuchenjerera kumusoro uye pasi iyo ramp. Ita shuwa kuti hapana nzvimbo dzisina kuenzana dzinotsvedza kana zvinhu zvinovhiringidza nzira yako. Kana zvichidikanwa, kumbira rubatsiro. Paunenge uri pushing wiricheya kumusoro a ramp, ita shuwa yekutarisa kana pasina zvipingamupinyi. Zvishoma nezvishoma simudza iyo ramp saka hauripi iyo wiricheya pamusoro. Kana uri kufamba wiricheya ndakagara pacheya iyo iri pamusoro a ramp, tsamira kumberi kwekumhanya mushure mekubata-anti-tippers. Usati waita kudaro, ita shuwa kuti une anti-tippers akaisirwa.
Famba uchibva pamigwagwa zvakanyatsonaka paunenge uchikwira pamusoro pehuswa, tsvina, uye mavhu. Kana zvichidikanwa, bvunza mumwe munhu kuti kusunda wiricheya yako.
Batanidza mwenje yekushandisa nguva yehusiku kuti ioneke. Iwe unogona kubatanidza mwenje inopenya, inoratidzira, kana mireza.
Chengetedza yako wiricheya pavhiki. Ita shuwa kuti zvese zvikamu zviri mumamiriro akanaka.
Usaturike rinorema mabhegi ari kumashure kwewiricheya yako. Zvinogona kukonzeresa chigaro pamusoro paunenge uchipinda kana kubuda pachigaro.
Tevera zviratidzo zvekuchengetedza traffic. Usachovha wiricheya yako mumugwagwa.
Kana uri kushandisa chigaro chemagetsi, ita shuwa kuti chazara zvakakwana.
Lock mabhureki kana uchipinda kana kubuda pachigaro.
Tsvaga nzvimbo yako yegiravhiti ku kudzivirira tsaona. Famba-famba pachigaro kuti uwane kunzwa kwekuti iwe une yakanyanya chiyero.
Dzivisa kukotamira kumberi kana kumashure kubva pakudonha. Usatsamire kure kumberi kana kumashure paunenge uchiedza kuwana chinhu chisingasvikike. Tenderedza chigaro chako padyo nechinhu kana uchinge wasvika pachinhu.
15. Chengetedza kubvisa chigaro nekudzivisa kuenda nekukurumidza. Kiya mabhureki kana uchipinda kana chaipo chigaro. Dzivisa kurova matutu makuru aine vhiri rimwe. Chengetedza kumhanya kunonoka kana uchinge wasangana nenzvimbo dzakaomarara nemakona akasimba.
Zvikamu zveWiricheya uye Zvayo Zvimiro